प्रम ओलीको भन्दै जसको फोटो सामाजिक सञ्जालमा रातारात भाइरल भयो ……को हुन् ? – Satabdi News
होमपेज / मुख्य समाचार / प्रम ओलीको भन्दै जसको फोटो सामाजिक सञ्जालमा रातारात भाइरल भयो ……को हुन् ?
शुक्रबार, कार्तिक २१, २०७७ , शताब्दी न्युज
कात्तिक २१, बेलबारी । सामाजिक सञ्जालमा राखिएका तस्बिर भिडियो जस्ता कुरामा सत्य नबुझी धेरैले कमेन्ट र शेयर गर्छन् । यसो गर्दा कानुनी रुपमा अपराध ठहरिन्छ वा अरुकाे मानमर्दन हुन्छ भन्ने हेक्का धेरैलाई हुँदैन भन्ने कुराको एउटा उदाहरण तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग एक व्यक्तिले टीका थाप्दै गरेको तस्बिर थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा सो तस्बिर राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि टिकाटिप्पणी भए । तर टीका थाप्ने व्यक्ति पर्साको वीरगञ्ज उपमाहानगरपालिका अलौका जनकलाल साह हुनुहुन्छ । उहाँ आफैलाई सो फोटो कस्ले सामाजिक सञ्जालमा राख्यो भन्ने थाहा छैन ।
बुधबार मात्र उक्त तस्वीर भाईरल भएको एकजना साथीले बताए पछि उहाँले थाहा पाउनुभयो । करिब दुई वर्ष पहिले पनि कसैले उक्त फोटो मागेको तर आफूले कसैलाई नदिएको तर कहाँबाट फोटो बाहिरियो आफूलाई थाहा नभएको साहले बताउनुभयो ।
आफूले फोटोहरु जम्मा गरेर राखेको हुनाले उक्त फोटो पनि घरमा हुनुपर्ने, छ छैन खोजेर बताउने साहले बताउनुभयो ।
तत्कालिन अलौ गाँऊपञ्चायत वडा नम्बर ६ बजारटोलमा २०२४ साल चैत १ गते जन्मिएका जनकलाल साह जन्मिनु भएको थियो ।
२०४६ सालमा भारतको पटनामा रहेको पिएमसीएच मेडिकल कलेज अन्तर्गतको सब्जीबागमा रहेको साईन्स कलेजमा ईलेक्ट्रोनिक्स ईन्जिनियरिंग अध्ययन गर्दै गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र बहाली भएको खबर पाएपछि नेपाल फर्किएको बताउने साहले २०५१ सालको दशैको टिकाको दिन साँझ ७ बजेर ३५ मिनट जाँदा राजा वीरेन्द्रको हातबाट टिका थापेको बताउनुभयो ।
त्यस दिन आफूले राज वीरेन्द्रसंग एक्लै केही कुरा गर्न चाहेको र त्यसका लागि समय दिन बिन्ती गरेपछि पर्सिपल्ट ११ बजे भेटने अवसर पाएको दाबी गर्नुहुन्छ । राजा वीरेन्द्रसंग भेटघाटको क्रममा आफू राजसंस्थाको भक्त रहेको र प्रजातन्त्रको आगमनले मर्माहत भएको बताएपछि राजाबाट केही वर्ष अझ हेर्न आग्रह भएको र प्रजातन्त्रलाई चल्न दिन निर्देशन गरिएको साह बताउनु हुन्छ । २०५२ साल देखि ५७ सालसम्म भिआईपी पासबाट दशै र राजाको जन्मदिनका दिन टीका ग्रहण गर्ने गरेको बताउनु भयो । ५८ सालमा राजपरिवारको हत्या भएपछि टीकाको कार्यक्रम नै नभएको र यस वर्ष कोभिडको कारण टिका ग्रहण गर्न नगएको बताउनुभयो । गोरखापत्रबाट साभार ।
You have reacted on "प्रम ओलीको भन्दै जसको फोटो सामाजिक सञ्जालमा रात..." A few seconds ago